बन्दा बन्दिमा : बदलिएको यौन जीवन । - Khabar Break | Khabar Break
-गोपाल ढकाल,लकडाउनले गर्दा अहिले व्यक्तिहरु फुर्सदिलो भएका छन। के गरेर समय बिताउने ? धेरैमा छट्पटी पनि बढेर गएको छ । लकडाउनको समयलाई सिर्जनशील रुपमा बिताउन नजान्दा यौनमा झनैबढी ध्यान जानसक्छ । तनावका बेला अन्य कार्यमा रुचि नजाने र यौनलाई नै आनन्द र मनोरञ्जनको प्रमुख माध्यम बनाउन सक्ने जोखिम पनि बढेर जान्छ । यौन सम्पर्कका बेला मस्तिष्कबाट अक्सिटोसिन, डोपामिन, एन्डोरफिनजस्ता खुशी र आनन्द दिने रसायनिक तत्त्वको उत्पादन हुन्छ । यसकारण पनि व्यक्ति यौनकर्मप्रति बढि लालायित हुनपुग्छ ।
रोगको संक्रमण बढेका बेला राखिने यौन सम्बन्ध असुरक्षित हुन्छ। जसको कारण यौनसम्पर्कजन्य संक्रमणको डर बढछ। साथै अनिच्छित गर्भ रहन सक्छ। राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले कोभिड-१९ को महामारी विश्वव्यापि फैलिदा धेरै महिलाहरु परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा हुदा ७० लाख महिलामा अनिच्छित गर्भरहने जनाएकोछ।
लकडाउनका कारण सिनेमा जाने, थिएटर जाने, रेष्टुरेन्ट तथा बार अनि पवहरू जाने बन्द भएपछि मनोरञ्जनको विकल्प सीमित भएकाछन । त्यसै कारणले पनि मन बहलाउन मानिसहरूको तन , मन यौन तर्फ गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यौन जोडि यसमा तयार नहुदा यौन हिंसा समेत हुनपुग्छ ।
तसर्थ, अहिलेको बिपत्तिको अवस्थामा पनि सुरक्षित र संयमित यौनलाई भने प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यौन सम्बन्धी तथा अन्य मानसिक समस्यामा परेका हरुका लागिलकडाउनको अवधिभरि मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रले निशूल्क मनोपरामर्श सेवा प्रदान गरिरहेकोछ । जसको लागि ९८१३५२७७३२ मा फोन गर्नसक्नु हुनेछ ।
( लेखक ढकाल मनोविद् हुन् । उनी ‘मार्क नेपाल’ संस्थासँग सम्बद्ध छन् । )
आत्महत्याको जोखिम बढ्दै, लकडाउनमा आत्महत्या भयावह भन्नु गलत !
अंगीकृत नागरिकताको बहनामा देश टुक्य्राउने षडयन्त्र काँग्रेसको !